Zinus FourCool ICOL 12 INCH | Rayson
Rayson na Rayson Mpaghara, Huasha Road, Shashan, Foshan High South Mpaghara, Guangdong, China. Isi ngwaahịa kachasị mma ponnell mmiri ahịhịa na-eweta. Ohiri isi Bonnell Bonnell Winege E nyere akụrụngwa Rayson ji site na ya sitere na isi mmalite ndị a na-achọpụta. Ndị otu nrụpụta anyị nwere ikike mkpochasị siri ike, na-eche na Rayson anyị nwere ọtụtụ ihe na-emepụta ihe ọhụrụ, n'ụzọ kachasị mma, na usoro arụ ọrụ. Ohiri isi n'elu bonnell A na-eji ngwaahịa a n'ọtụtụ ngwa maka ike ya ngwa ngwa. Ọ bara uru karịsịa ma enwere ike isi mmalite nke ike nwa oge.
Ọ na-agbasi mbọ ike mgbe niile, Rayson etolitela ịbụ onye na-achụ n'ụlọ ahịa na ndị ahịa. Anyị na-elekwasị anya n'ịdị ike nke sayensị na azụmaahịa ọrụ. Anyị edobela ngalaba ọrụ ndị ahịa ka ọ ka mma nye ndị ahịa na ọrụ ngwa ngwa gụnyere ọkwa nsuso. Zinus siri ike akara ngosi 12 inch taa, Rayson na-ama elu dị ka onye na-eweta ọkachamara na nke nwere ahụmịhe na ụlọ ọrụ. Anyị nwere ike imewe, mepụta, mepụta, ma ree usoro dị iche iche na nke anyị na-ejikọ mbọ niile na amamihe anyị niile. Ọzọkwa, anyị na-ahụ maka inye ndị ahịa ọrụ dịgasị iche iche maka ndị ahịa gụnyere nkwado ọrụ na ọrụ ọsọ ọsọ. May nwere ike ịchọpụtakwuo banyere ngwaahịa Zinus First 6 inch na ụlọ ọrụ anyị site na ịkpọtụrụ US.People nwere ike iyi ngwaahịa a ruo ọtụtụ afọ. Ọbụna na a na-asa ya ma kpọnwụọ ọtụtụ oge, ọ ka na-adị mma ma dịkwa mma karịa iyi.